🥇 accounting for salon
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 577
Ividiyo yokubalwa kwezimali salon
Oda i-accounting ye-salon
Ukubalwa kwe-salon yobuhle kuyinqubo ekhandlayo futhi inemisebenzi eminingi ekhethekile, engadingeki kwezinye izindawo zomsebenzi webhizinisi onjalo. Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi umqondisi wenkampani akhethe kakhulu ama-accounting nezinhlelo zokulungiswa kwe-salon esezingeni eliphansi efisa ukunciphisa izindleko ngangokunokwenzeka. Ngenxa yalokhu, ubhekene nokushoda kwesikhathi sokucubungula nokuhlaziya ivolumu enkulu yedatha ekuqhutshweni kwebhizinisi, kanye nokuphathwa, amarekhodi ezinto ezibonakalayo kanye nokubalwa kwezimali, ukugcinwa kwezibalo ku-salon yokubakhona kwamakhasimende, ukuphathwa komsebenzi wochwepheshe , ukulawula uhlelo oluyinkimbinkimbi nolubanzi lwamabhonasi nezaphulelo neminye imisebenzi eminingi. Kulokhu, ithuluzi elihle kakhulu lokwandisa inqubo yokukhiqiza yaleli bhizinisi ukwethulwa kohlelo lwe-USU-Soft accounting lwe-beauty salon. Ithathwa njengeluhlelo oluhamba phambili lwebhizinisi lobuhle futhi ingashesha ukuzenzekelayo ukubalwa kwezimali, kanye nokubalwa kwabasebenzi nokuphathwa ku-salon yakho. Isoftware ye-USU-Soft beauty salon accounting ikusiza ukuthi ugcine amarekhodi ngendlela efike ngesikhathi ngokuya ngemininingwane ethembekile eyenziwe ngamakhono ohlelo lwe-accounting. Uhlelo lwe-USU-Soft lwe-accounting nokuphathwa kwebhizinisi lwe-salon yobuhle luthungatha kahle izidingo zamabhizinisi zanoma yimuphi umugqa webhizinisi: ama-beauty salon, ama-studio amahle, ama-nail salon, izikhungo ze-spa, ama-salon okushuna, ama-studio ama-tattoo, ama-massage salon, nabanye. I-USU-Soft njengohlelo lokubalwa kwezimali nokugcinwa kwe-salon yobuhle iziveze kaningi ngokukhanya emakethe yeRiphabhuliki yaseKazakhstan nakwamanye amazwe e-CIS. Uhlelo lwe-USU-Soft accounting luphawuleka ngokuba lula kwalo nokusebenziseka kwalo, kanye nokukwazi ukuhlela nokuhlaziya imininingwane emayelana nemiphumela yesaluni yakho yobuhle nganoma yisiphi isikhathi. Uhlelo lwe-USU-Soft beauty salon and accounting programme lusetshenziswa ngokulinganayo njengomqondisi, umphathi noma i-beauty salon master, kanye nomsebenzi omusha. Umphumela obaluleke kakhulu wokufaka uhlelo lwe-USU-Soft accounting ukuthi manje ubheka zonke izibalo futhi wazi ngokuqondiswa kokuthuthuka kwenkampani, okudinga ukugadwa njalo.
Imibiko eyahlukahlukene isiza ukulawula ibhizinisi lobucwebecwebe. Uhlelo lokubalwa kwezimali luhlinzeka ngosizo oluyigugu enhloko yesalon yobuhle emnika ithuba lokwenza izinqumo ezibalulekile zokuphatha. Uhlelo lwe-accounting lokuzenzakalela kanye nokubalwa kwemisebenzi yezindawo zokulungisa ubuhle lukunikeza ngosizo olubalulekile, lusheshise inqubo yokufaka nokukhipha imininingwane. Uhlelo lokuphathwa kwebhizinisi livumela isikhungo sobuhle ukusetha ukuhlaziywa kwemisebenzi yesitudiyo sonobuhle, okuzonikeza abasebenzi ithuba lokukhulula isikhathi sabo emsebenzini ongadingekile wokwenza umsebenzi. Ake sicacise ngezici nezinzuzo ze-USU-Soft njengohlelo lokuphatha ama-beauty salon (i-beauty studio, i-spa, isikhungo se-spa, i-solarium, isitudiyo se-tattoo, njll.). Uma i-salon yakho inesitolo, khona-ke uqinisekile ukuthi ungayithanda indlela ongasebenza ngayo nemikhiqizo ohlelweni lwe-accounting lwama-salon wobuhle. Ungenza izibalo zethebula lesigaba ngasinye nesigaba esingezansi sezimpahla, kanye nokubona inani eliphelele lemali engenayo evela ekuthengisweni kwesigaba ngasinye ngomdwebo. Imininingwane ifaka phakathi inani lezinto ezithengisiwe ngamayunithi wazo wokulinganisa kanye nezamba eziphelele zokuthengisa. Ezansi kweqembu ngalinye lomkhiqizo ungabona imiphumela ngezigaba nangezigaba ngokwehlukana, futhi 'egumbini elingaphansi' lombiko wamathebula kunamanani aphelele esikhathi sonke. Njengabanye abaningi, lo mbiko wenziwa nge-logo yakho nazo zonke izinkomba ezichaziwe. Endaweni yokuzulazula ngakwesokunxele kombiko, ungakhetha isigaba esithile noma isigaba esingezansi ukuhambisa ngokuzenzakalela ezibalweni. Ungathumela kalula umbiko ngokwawo ngenye yamafomethi we-elektroniki anamuhla, ngokwesibonelo, ukuthumela idatha kubaphathi ngeposi. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa umyalo we 'Export'. Unethuba lokuphrinta noma yimuphi umbiko. Ukuze wenze lokhu, chofoza umyalo 'Phrinta', khetha iphrinta bese ucacisa inani lamakhophi noma ezinye izilungiselelo zokuphrinta.
Into ebaluleke kakhulu emsebenzini wanoma yiliphi ibhizinisi ngabantu, okungukuthi amakhasimende afika ukuthola insizakalo futhi ayikhokhele imali. Ngaphandle kwabo ibhizinisi lakho lilahlekile. Abantu bayisisekelo sobukhona bakho. Yingakho kufanele wenze konke okusemandleni ukuze amakhasimende akhethe wena. Ukwenza kanjani lokhu? Udinga ukuba phambili enkonzweni, ngendlela oxhumana ngayo neklayenti nangesivinini senkonzo. Akunakwenzeka ukufeza ngaphandle kobuchwepheshe besimanje nezinhlelo ezintsha zokubalwa kwezimali ezikuvumela ukuthi ukwandise umsebenzi webhizinisi lakho. Ngenxa yesoftware yethu, ungakhohlwa unomphela ngomsebenzi ohamba kancane, amaphutha abasebenzi kanye nokunganeliseki kwamakhasimende! Konke okudingeka ukwenze ukuthatha isinyathelo esibalulekile (thenga uhlelo lwethu) futhi uthathe ibhizinisi lakho liye ezingeni elilandelayo. Uma wesaba ukuthi ngeke ukwazi ukubhekana nalo msebenzi, singakuqinisekisa ukuthi inkampani yethu inikeza ukwesekwa okuhle kakhulu kwezobuchwepheshe. Asikushiyi uze ufunde ngokugcwele ukuthi ungasisebenzisa kanjani isicelo! Iqembu lethu lokusekela lihlala lixhumana. Akunankinga abangakwazanga ukuyixazulula, ngoba abasebenzi bethu bangongoti abahle kakhulu.